Ny dokotera dokotera vaovao dia milatsaka ho an'ny horonantsary sokatra mpamono olona mbola tsy hitanao mihitsy
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny dokotera dokotera vaovao dia milatsaka ho an'ny horonantsary sokatra mpamono olona mbola tsy hitanao mihitsy
by Timothy Rawles Aprily 19, 2021
nosoratan'i Timothy Rawles Aprily 19, 2021
Mpanoratra John Campopiano dia mipetraka eo amin'ny tantara mahatsiravina kely ao amin'ny doka fohy fohy nataony Snapper: Sarimihetsika sokatra mihinana olona izay mbola tsy namboarina mihitsy. Manana ny tranofiara ho anao eto ambany izahay.
Ny taona 80 dia fotoana nahafinaritra ho mpankafy horohoro ary mpamorona sarimihetsika vao manomboka. Ny folo taona no nanome antsika The Dead Evil, CHUD, ary ny Blob remake.
Tamin'ny faramparan'io folo taona io sy ny fiandohan'ny taona 90 dia nanomboka niova ho saribakoly be vola na farafaharatsiny izy ireo nijery izany fomba izany.
Mandritra izany fotoana izany, vondrona kely mpamokatra sarimihetsika any amin'ny morontsiraka atsinanana antsoina hoe Mike Savino sy Mark Veau no niasa tamim-pitandremana tamin'ny sangan'asany antsoina hoe Tsivaravara momba ny sokatra mihinana lehilahy (hijanona eo amiko). Saingy toy ny ankamaroan'ny famokarana ambany teti-bola, dia be ny olana teny an-dalana.
Ity Campopiano fohy ity, toy ny amin'ny sarimihetsika marobe, dia miditra lalina Tsivaravara ary izay rehetra mety ho nisy. Ireo horonantsary fanadihadiana azy hafa toa ny Pennywise: Ny tantaran'io ary Tsy nipoitra sy tsy fantatra: Ny làlana mankany amin'ny Sematary momba ny biby derain'ny vondrom-piarahamonina.
saingy Tsivaravara tsy tantara momba ny fahombiazan'ny sarimihetsika navoaka. Mikasika ny fizotry ny fananganana sarimihetsika mahaleo tena tsy misy afa-tsy nofinofy, fifandraisana manan-talenta, ary loharano vitsivitsy. Ny mpankafy sarimihetsika sy horohoro dia tsy tokony tsy hahita an'ity.
Scott Andrews, fantatra amin'ny anarana hoe "Master Monster Maker of Massachusetts," dia nanampy tamin'ny famolavolana ilay zavaboary aza.
Miaraka amin'ny vokatra azo ampiharina, pyrotechnics, ary ny fijanonana fiara mandeha amin'ny fotoana tena izy, dia mahagaga ny antony namelana ity sarimihetsika mampihoron-koditra ity tao anaty fitoerany. Angamba mbola misy fanantenana an'izany.
Snapper: Sarimihetsika sokatra mihinana olona izay mbola tsy namboarina mihitsy ho azo hanofa / hikoriana amin'ny alàlan'ny efitrano fitiliana virtoaly an'ny Coolidge Corner Theatre avy any Zoma 23 aprily - alakamisy 29 aprily.
Amidy ny tapakila alatsinainy 19 aprily ETO. Ny Coolidge dia trano an-trano hatrizay ho an'ny trano fanaovana kanto sy sinema indie any amin'ny faritr'i Boston, hoy i Campopiano fa voninahitra ho azy ny hilalao ao.
Jereo ihany koa ity horonantsary fanadihadiana ity amin'ny fetin'ny sarimihetsika na aiza na aiza.
Ny sary lohateny dia nahazo fankasitrahana avy amin'i Mike Savino, Mark Veau, ary John Campopiano.
John CampopianoMark VeauMike SavinoTsivaravara
Marvel's 'Shang-Chi' Trailer dia eto hampidina anao amin'ny tarehy